Teregiramu ICO zvirongwa - Blockchain News
Ndira 8, 2018 arun
Teregiramu anoronga multi-mabhiriyoni emadhora ICO kuti dzokukurukurirana cryptocurrency
Encrypted mameseji startup Teregiramu yaienda anoronga vomurova yayo blockchain chikuva uye chizvarwa cryptocurrency, powering kubhadhara pamusoro wayo dzevakurukuri Anwendung uye mberi. Maererano vakawanda zvinyorwa vakataura TechCrunch, kuti "Teregiramu yaienda Open Network" (tani) achava chitsva, 'Chizvarwa chechitatu' blockchain pamwe pevane nezvaanogona, pashure Bitcoin uye, Papera, Ethereum rwakagadzirira nzira.
The kanda vachapiwa mari ane kukuru Initial Coin Zvinopiswa, pamwe kukasaitwa private pre-rokutengesa siyana mazana emamiriyoni, vanokwanisa kuita izvozvo mumwe ICOs kupfuura zvevakomana. Kudiwa nechido chokuti panzvimbo ICO vachibva itsva startup, Teregiramu munhu zvakanaka kusimbiswa mameseji papuratifomu rinoshandiswa pose.
Yaienderana Homegrown cryptocurrency aigona kupa Teregiramu yaienda kuti muripo gadziriro kukuru rusununguko kubva chero hurumende kana kubhengi - chinhu Co-muvambi uye CEO Pavel Durov anozivikanwa kuti kuchochora pashure makambani vakatora pamusoro kambani yake yokupedzisira, Russian pasocial network VK. Durov haana kugamuchira pakuedza TechCrunch kuti vanoverengeka kutaura naye pamusoro nyaya iyi.
Mukana munhu cryptocurrency mukati nevakawanda wokurera mameseji Anwendung hwakakura kwazvo.
With cryptocurrency dzinofambiswa kubhadhara mukati Teregiramu yaienda, vanozvishandisa aigona yokunzvenga mubhadharo yechikoro kana kutumira mari ayambuka miganhu yedzimwe nyika, kufamba inopfupikisa mari muchivande nemhaka Anwendung wacho encryption, kununura micropayments kuti kuti tiwane wo akakwirira kadhi yechikoro, uye zvakawanda. Teregiramu yatova of facto kukurukurirana mugero yose cryptocurrency vemunharaunda, kuita dzinongoitika kumba pachake mari yayo uye Blockchain.
Kutengesa munhu tani kuti cryptocurrency
Teregiramu zvinonzwisiswa kuti kufunga pakurera zvakawanda $500 miriyoni vari pre-ICO kutengeswa panguva zvinogona zvachose chiratidzo kukosha kuwanda $3 bhiriyoni kuti $5 bhiriyoni. zvisinei, avo nhamba aigona kuchinja pamberi ICO, izvo zvinogona kuuya nokukurumidza March. Nhamba iwayo kuti zvichida guru private crypto kumutsa kudanana pashure Tezos, wakamutsa pamusoro $230 mamiriyoni July.
A pre-sale munzvimbo ICO ndiye risingamboshandisi chivharo pamusoro upfumi (dzimwe nguva discounts) kukwezva makambani makuru ('Hove huru') pamberi vakwanise chiratidzo kutengeswa kune chitoro vanoita. veruzhinji, Zvitoro danho ane ICO uderedze kumutsa zvishoma nokuti pane refu muswe vanhu bhizimisi duku inopfupikisa. Asi pamberi-rokukwidza ICO pamwe zvechechi mubhizimisi tivimbe kuti chitoro vanoita.
Vaya pre-sale vanoita kungadiwa kuisa risingamboshandisi mutenge-iri $20 miriyoni kana vari kunze Durov kuti yomukati denderedzwa. Sources vanoti ICO zvinoda chaiyo Fiat mari akaita US chemadhora Utenge-mu, kwete Bitcoin kana Eteri sezvo vamwe ICOs vane zvevakomana.
Top-weDanho zvechechi mubhizimisi yemakambani vakaratidza kufarira, asi Durov anonzi vasingafariri kubvuma mari dzavo. Imwe kambani runyerekupe kuti kusundwa kuti pre-sale yavaive ndiye Mail.Ru Group (aimbonzi DST), yakavambwa Russian emigre Yuri Milner. A achimiririra DST haana kupindura mubvunzo wedu pamusoro nyaya iyi. Sezvineiwo, Mail.Ru Group ndiye mari kuti dzakaguma kutenga kambani Durov wokupedzisira VK.
Kunzwisisa Teregiramu yaienda Open Network
pfungwa Durov ndeyokuva nokuparura imwe blockchain zvachose itsva, kushandisa teregiramu yacho 180 mamiriyoni vanoshandisa sezvo chitundumuseremusere huni simba mberi kupinda zvikuru mukuitwa kure cryptocurrency uye nokuita Teregiramu yaienda, zvinobudirira, mumwe kingmaker zvimwe cryptocurrencies, nokuti ayo aripo pakafunuka.
Maererano Teregiramu yaienda kwakaita chena pepa kuti TechCrunch ane zvikamu kuongororwazve, ayo cryptocurrency achanzi 'giremu "uye Tingangonyanya kuwana nokukurumidza zvikuru mukuitwa kuburikidza yakasungirirwa Teregiramu yaienda kuti dzevakurukuri Anwendung.
Sources vanoti Durov asarudza chokubatanidza zvese centralized uye decentralized kwezvivako, sezvo zvachose decentralized rezvebonde asingadi kukwira sezvo kutsanya somunhu iro rine zvimwe zvinhu centralization, saka nei teregiramu anofanira neImba yayo blockchain.
Kutamira kune imwe decentralized blockchain pakakwirira aigona kuuraya shiri mbiri nedombo rimwe Teregiramu yaienda. Uyewo pakusika wenguva nomukondombera cryptocurrency upfumi mukati Anwendung, raizova putira Makatsamwira nokurwiswa uye kupomerwa rudzi-inoti akadai Iran, apo zvino nezvokuvandudzika 40% kuti Iran Indaneti motokari asi yakamboshandiswa akarwiswa pakati munyika okutsutsumwa kurwisa hurumende.
Teregiramu akabatanidzwa kuputsika enyika BALANCInG chiito kuedza uye kuyeuka vanoshandisa ayo munyika, kuvharira pasi dzimwe hova kuti anoshevedza kuputsika hurumende, apo nokuchengeta vamwe rakashama.
WeChat Asi With Crypto
With tani, Teregiramu ndehwokuti kuva cryptocurrency anotsanangura utility akafanana WeChat, iyo yatumbuka mu zvinopfuura mungotaura App uye anoita se default muripo nomazviri vazhinji China.
Nepo vachibhadhara zvinogona kuitwa nokukurumidza zvikuru WeChat zvakasiyana-siyana mabasa, gadziriro anoramba centralized chaizvo. A decentralized kuchikuva akadai tani aigona kupa zvakawanda chibatiso uye kushinga.
Sources vanoti Teregiramu yaienda anoronga kubvumira vanoshandisa kubata vose Teregiramu yaienda kuti mari uye Fiat mari mune kukasaitwa chikwama.
Kunewo vane yokuvaka mararamiro Teregiramu yaienda anovaka akapoteredza, apo bots uye mabasa zvinobayirwa sezvinoreva wechitatu-party Developers. zvakare, pano tani aigona, mu pfungwa, underly zvose mumwe yokuvaka kunobudisa Teregiramu yaienda.
mune 132 peji chena bepa, Teregiramu rakagadziridza mana padanho urongwa:
"Tani Services" richava chikuva kuti wechitatu-party mabasa ose kuti inogonesa smartphone kufanana noushamwari interfaces kuti decentralized Apps uye akangwara zvibvumirano.
"Tani DNS" riri basa rakavapa mazita evanhu-verengeka nhoroondo, ngwara zvibvumirano mabasa uye samambure nodes. With tani DNS, angadaro decentralized mabasa aigona kufanana "kuona Website pamusoro World Wide Web."
"Tani kubhadhara" ari chikuva kuti micropayments uye micropayment mugero Network. It ndehwokuti kushandiswa "pakarepo kure-chain ukoshi anotamisa pakati vanoshandisa bots uye mamwe mabasa". Dziviriro akavaka mugadziriro yakagadzirirwa nechokwadi kuti anotamisa izvi "vari semaziviro pamusoro-chain kwema".
The "tani Blockchain" panofanira kuva cheni tenzi uye 2-to-the-simba-of-92 padivi blockchains. Its kupfuura chinozikamwa ndechokuti kuti zvichaita kuva "magumo Sharding Paradigm" kuzadzisa scalability. saka, Tani blockchains ndanzwawo kuti kukwanisa 'rwoga akatsemura uye batanidza kutakura kuchinja mutoro ". Izvi zvingareva itsva kutigumbura kunotangira nokukurumidza uye "kusavapo refu pamwe nekurutsa anobatsira kuchengeta mutengapwe kunodyira yakaderera, kunyange kana vamwe mabasa vachishandisa pachikuva kuva massively dzakakurumbira ".
Zvichakubatsirawo panofanira "Instant Hypercube hwokutiparadza" akagadzirirwa saka blockchain anogona kuramba pamusoro nokukurumidza kunyange sezvo inokura. uchapupu yayo rokutambudzikira nzira kuchasvika tabvumirana kuburikidza musiyano pakati 'Byzantine Mhaka Anoshivirira' dzakati, zvakare kuwedzera nokukurumidza uye kunyatsoshanda. Uye kushandisa 2-D Kuparadzirwa Ledgers. Izvi zvinoreva tani anogona kukura itsva dzinoshanda inoperera pamusoro chero zvaigadzirwa rikaratidzwa kuti kururama kudzivisa chero basa nemaforogo. Nemamwe mashoko, Tani ndehwokuti kuva 'kuzvipira kuporesa'.
Tani kechitatu chizvarwa blockchain hwuchavapano pasi simba 'uchapupu rokutambudzikira' richengetwe nemapoka akawanda rurefu mwero mhosva shiviriro. Zvichakubatsirawo kubata kuchengetera ID, kubhadhara uye akangwara zvibvumirano. saka, pane kuvimba uchapupu basa rokusika mari yayo, Teregiramu achava kuvimba itsva, zvishoma nzira pakuchera cryptocurrency pane chepakutanga Bitcoin nzira simba-hogging.
The vanoti ndechokuti zvichava vanokwanisa inopfuura iyoyo nokure nhamba kwema, kumativi 1 miriyoni pasekondi yoga yoga. Nemamwe mashoko, zvakafanana vavariro iri Polkadot chirongwa kubva Berlin - asi ane yakaiswa nehwaro 180 miriyoni vanhu. Izvi zvinoita kuti munhu 'interchain' pamwe vainzi 'sharding guru'.
The chena bepa Rinoratidzawo zvakajeka kuti mana muzana nerubatsiro magiramu (200 miriyoni magiramu) vachapiwa dzichengeterwe Teregiramu yaienda kukura chikwata aine makore mana vesting nguva. Teregiramu uyewo anoronga tiine "kanenge 52 muzana "yose nerubatsiro magiramu cryptocurrency kuidzivirira kubva dzokufungidzira zvokutengeserana uye kuramba mukana wokushandiswa. The yasara 44 muzana kutengeswa muna zvose paruzhinji uye pasiri Sale.
Currency vachapiwa dziri zvokunze exchanges uye kushandiswa mukati teregiramu App.
Nguva-akachenjera, kuti chikamu gore rino rokutanga vachaona kushanda teregiramu External Akachengeteka ID, uchiteverwa ane MVP pamusoro tani. Kushanda teregiramu Wallet yava kuda Q4 2018, uye kusikwa upfumi tani anotsanangura aigona vomurova mu Q1 2019. The vamwe tani Services kuti mutevere Q2 2019.
Vamwe vari crypto vomunharaunda kuramba chokwadi tani. "Ini chimbofunga izvi nzira CEO wacho monetizing Teregiramu yaienda, nyonyova,"Anodaro Jackson Palmer, muvambi mangwanani cryptocurrency Dogecoin.
A mabviro techcrunch.com
Mining midziyo mugadziri Bitmain vaiwana $ 3b gore rapera, sezvavanogona Nvidia
Beijing anotsanangura Bitmai ...
akatisiyira Price: Hukuru...
Huobi anowana licen ...
Previous Post:Blockchain News 8 Ndira 2018
Next Post:Blockchain News 9 Ndira 2018